Nguva ndizvo zvese mubhizinesi. Inogona kunge iri mutsauko pakati peangangoita mutengi mutsva uye kusungirirwa pairi. Hazvitarisirwe kuti iwe unosvika pakutengesa kutungamira pakuedza kwako kwekutanga kufona. Zvinogona kutora miyedzo mishoma sezvo kumwe kutsvagisa kunoratidza kuti inogona kutora akawanda senge 18 mafoni usati wasvika kutungamira parunhare kekutanga. Ehe, izvi zvinoenderana nezvakawanda zvakasiyana uye mamiriro, asi ndeimwe
China, November 4, 2021 China, November 4, 2021 Douglas Karr
Kana uchitengesera kumabhizinesi, unoziva kuoma kwazvakaita kuwana makambani angangove uye kutsvaga vanoita sarudzo ipapo… ndoda kunzwisisa chinangwa chavo chekutenga chaizvo. B2B sales superstars mamwe mashura anoshamisa, kufona mushure mekufona kune vemukati nekunze vanobatika vavaka hukama navo kuti vaone vanhu chaivo pamakambani chaiwo - panguva chaiyo. ZoomInfo yakavaka inotungamira yepasirese Dhata seSevhisi (DaaS) chikuva